Xildhibaan: “Farmaajo wuxuu rabaa kala doorashada labo wada daran” | KEYDMEDIA ONLINE
Xildhibaan: “Farmaajo wuxuu rabaa kala doorashada labo wada daran”
Wasiir Dowlihii hore ee Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur, ayaa sheegay in Farmaajo uu dadka ku qasbayo kala doorashada labo waddo oo kala daran.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah baarlamaanka 10-aad ee muddo xileedkiisu dhaamaday ayaa sheegay in Farmaajo uu dadka Soomaaliyeed kala dooran siiyay labo arrin, kuwaas oo kala ah; Kali-talis iyo dagaal sokeeye.
“Madaxweynihi waqtigiiisu dhamaaday Mohamed Abdullahi Farmaajo waxuu qabaa in shacabka Soomaaliyeed laba wada daran mid uun doortaan;
1. Kaligii talis in ay isku dhiibaan aqabalaanna in uu Sharci darro ku xakumo
2. In uu dalka geliyo dagaal sokeeye dad badane ku dhintaan kuna dhaawacmaan, rajadii dowladnimadina sidaas ku baabi’iyo.” Ayuu yiri Xildhibaan Cabdullaahi.
Xildhibanku wuxuu is weydiiyay, waxa shacabka Soomaaliyeed la gudboon, wuxuuna ku baaqay in loo istaago badbaadada dalka oo uu u arko in Farmaajo uu meel xun u wado,
“Waxaan qabaa in aan u wada istaagno sidi aan aan uga hortagi lahayn himilooyinka wada foosha xun ee Farmaajo rabo in uu ku foolxumeeyo Soomaalinamada una marno wada kasta una hurno qiima walba.” Ayuu yiri Xildhibaanku.
Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur, ayaa ka mid ah Shanta iyo Tobankii Xildhibaan ee Shalay loo diiday in galaan xarunta Golaha Shacabka, wuxuuna hore uga tirsanaa guddigii maaliyadda ee Golaha Shacabka ee hore loo kala diray kadib markii ay soo bandhigeen 42 milyan oo doolar oo ku maqan jeebka xukuumadda 2018-kii.
Wassiir Dowlihii hore ee Wasaaradda Maaliyadda, ayaa dhawaan sheegay in nin ka tirsan ciidanka Nabad Sugidda oo la yiraahdo Shakiib uu ugu hanjabay inuu dilo doono isaga iyo xildhibaanada kale ee Mucaaradka.